Iindawo eziqeshisayo zokuzikhupha, iindawo, izinto onokuzonwabela neendawo - Airbnb - Iingcamango Zokuhamba
Iindawo eziqeshisayo zokuzikhupha, iindawo, izinto onokuzonwabela neendawo - Airbnb
Akunyanzelekanga ukuba ube ngumzingeli wesiporho ukuze uqonde kancinci Umsebenzi oqhelekileyo iza ngo-Okthobha. Lixesha elinye lonyaka apho wonke umntu anqwenela amava anokubanika amaqhuqhuva okanye aboyikise Ukuqeshisa kwa-Airbnb ungahlangula zombini. Injalo: awuzukuhlala wedwa. Ke ukuba uhlala ufunda malunga okanye uthatha ukhenketho lwezindlu ezihanjisiweyo, emva koko unokukwazi ukuphakama ngokubhukisha ezi haunted Ii-Airbnb. Musa ukuza ukhala kuthi xa izinto zihamba ebusuku ngexesha lokuhlala kwakho.
Nangona oku Ikhaya laseNew Orleans ijongeka ngathi ithule kwaye iyathandeka, umlando unokuthi igumbi lokurenta likhaya lentombazana encinci ukusuka kwiminyaka ye-1890s edla ngokubonakala ijikeleza ngengubo etyheli. Yeyona Airbnb inezona ndwendwe ziphambili, ukuba usibuza.
uyilo lwanamhlanje lweethayile
INCWADI NGOKU $ 115 / ngosuku
Kodwa ungakhathazeki: Ababuki zindwendwe bathi unentloni kakhulu, yiyo loo nto eli gumbi labucala lokuqeshisa (i $ 115 ngobusuku) yindawo efanelekileyo yokubheja yabantu abanomdla wokunxibelelana intle iziporho.
Kukho isizathu soku ekhaya wavotelwa 'njengeyona ndlu imangalisayo' eSaint Paul, eMinnesota: Igcinwe yidoberman egama linguScotch kwaye inendawo emnyama neyoyikekayo yangaphandle.
INCWADI NGOKU $ 72 / ngosuku
Umbuki zindwendwe uthi abazingeli abaziziporho baya kuziva kanye ekhaya kwigumbi lokulala labucala, elinokuba lelakho kuphela ngeedola ezingama-72 ngobusuku bonke.
Le Savannah, Georgia, ndlwana yakhiwa emva ngo-1799 kwaye ngoku yeyona ndawo iphambili ekuthengisweni kweziporho esixekweni- yayiyinxalenye yeseti yefilimu kaRobert Redford Umcebisi .
INCWADI NGOKU $ 178 / ngosuku
Imithi yomgangatho ophahleni yenza oku ndlwana phantse ucolile-ukuba ungadlula kubukho bayo. Unomdla? Ungaqeshisa ngalo lonke ikhaya nge- $ 178 ngobusuku.
amathambo alungileyo kwi-hgtv
Ungayiphelisa njani intsimbi
Ngaphakathi kwale Yorkshire Yonke iflethi okanye indlu ekwicomplex e-United Kingdom 'ligumbi lokuhlanya' elingaphezulu kweminyaka engama-600 kwaye (ukuba ukwi-spookiness yamaxesha aphakathi) yinto ekufanele ukuba uyihambile.
INCWADI NGOKU $ 157 / ngosuku
Nangona kunjalo, kufuneka sitsho, indawo yokuhlala isitayile. Ungahlala kule ndawo yokuhlala i-157 yeedola ubusuku ngabunye, siyathemba ukuba unokulibala ngale ndawo idlulileyo lakutshona ilanga.
Ukuba ukuhonjiswa koku igumbi lokulala e-Great Dunmor, e-United Kingdom akwanelanga ukukuhambisa ngaphandle, emva koko izikhalazo ezingachazwanga ezivela ezindongeni ngokuqinisekileyo ziya kuyenza.
iintyatyambo eziphila ebusika
INCWADI NGOKU $ 164 / ngosuku
Yenzelwe ukuba ijongeke njengegumbi lomntwana wase-Edwardian elineminyaka esixhenxe kwaye iza netrone ngeedola eziyi-194 ngobusuku bonke.
Oku indlu yasefama Ifumaneka eGettysburg, ePennsylvania, kwaye yasetyenziswa njengesibhedlele emva kweMfazwe yaseGettysburg. Ngenxa yoko, ikhaya kutyholwa ukuba liyazanywa-kodwa ababuki zindwendwe bathembisa ukuba iziporho zinobuhlobo.
INCWADI NGOKU $ 105 / ngosuku
Igumbi lixabisa i-105 leedola ebusuku ukuhlala kwikhaya eligcwele abantu abaninzi-uninzi lwabo aluhlali.
flip okanye flop back ndawonye
Ukuba ukulungele ukuya eMoscow, eRashiya, unokuhlala kule nqaba, enesiporho sayo esibonakala veki nganye ezinzulwini zobusuku.
INCWADI NGOKU $ 200 / ngosuku
Ikhaya liza namachibi amabini okuqubha- intsingiselo, nokuba awukho kwimisebenzi yobugqi, kusafanelekile ukuba uyiqwalasele.
OkulandelayoIindawo Eziqeshisayo Zokuzonwabisa Ezintle ku-Airbnb Isibhengezo-Qhubeka nokuFunda apha ngezantsiULauren Smith McDonough Umhleli oMkhulu ULauren ungumhleli ophezulu kwi-Hearst.Lo mxholo wenziwe kwaye ugcinwe ngumntu wesithathu, kwaye ungeniswe kweli phepha ukunceda abasebenzisi ukubonelela ngeedilesi zabo ze-imeyile. Unokwazi ukufumana ulwazi oluthe kratya malunga noku kunye nomxholo ofanayo kwipiyano.io
Iincukuthu ezibonakala ngathi ziincukuthu
iikhabhathi ezi-shaker zoyilo ekhitshini
izindlu ezenziwe ngezinja